Muhiimadda Sawireynta Muuqaalka - Khabiirka Cirka
Haddii aad tahay ganacsade-yaashii, blogger ama webmaster, waa inaad ogaatid muhiimada mashiinka raadinta hal-abuurka (SEO). Lisa Mitchell, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa ka digtay in aan laheyn wax ku ool ah mashiinka raadinta, bogga iyo bogga bogga ee SEO, maaha suurtagal in la helo maqaallada boggaga hore ee Bing, Yahoo, iyo Google . Qaar ka mid ah joornaalada iyo websaydhku waxay hubiyaan in maaddooyinkooda si dhammaystiran loo ufiiriyo Google, laakiin sawirada ay isticmaalaan si haboon uma fiicna. Waa ammaan in la yidhaa naqshadeynta muuqaalku waa qodobka muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso maxaa yeelay dad badan ayaa raadinaya sawirro caan ah. Haddii sawirrada bloggaaga ama bogga internetka ay ku bilaabmaan darajo, fursada waxaad heli doontaa tiro badan oo martida ah.
Maxay tahay inaan u baahannahay inaan wax ka qabano sawirrada?
Waxaa jira sababo kala duwan oo lagu hagaajinayo sawirradaada - best video analytics. Sawirada aad isticmaashid maktabadaha waxay kaa caawineysaa inaad hagaajiso dhibcaha SEO, si aad u eegto rafcaankaaga maqaallada, samee iyaga search engine friendly, iyo door muhiim ah si kor loogu qaado xawaaraha loading boggaaga. Waxaa jira faa'iidooyin fara badan oo ka mid ah wax soo saarka sawir-qaadista, tusaale ahaan sawirrada sawir-qaadista bogagga Instagram iyo Pinterest ee gaadiidka tayada leh ee bogagga shabakadda, sawiradu waxay muujinayaan natiijooyinka natiijooyinka raadinta raadinta , waxaadna heli kartaa sawirradaada halka sare. Waxaa intaa dheer, sawirada waxay sare u qaadayaan heerka boogta ah ee boggaaga iyo kordhinta dhibcaha SEO. Haddii aad diirada saartid samaynta sawirro gaar ah, waxaad heli kartaa dib u eegis tayo leh marka blogyada kale ama bogagga kale isticmaalaan sawiradaada maqaalkooda maaddaama ay ku siin doonaan xiriirka deynta ah
Raadi sawirada saxda ah ee boggaaga:
Ka hor intaadan isticmaalin sawirro qaar ka mid ah maqaalladaada, waxaan jeclaan lahaa inaan kuu soo bandhigo ilo dhaqaale oo aad si sahlan u heli karto sawirrada kaydka. Markaad la macaamileyso sawirada, waa inaad isticmaashaa ilo sax ah oo keliya oo iska ilaali sawirrada Google sababtoo ah sawirada intooda badani waxaa lagu daabacaa qaybtan..Website-yada sida FreeDigitalPhotos, Pixabay, Wikipedia, iyo MorgueFile waxay bixiyaan sawirro badan oo muuqaal ah, Shutterstock ayaa ah meesha aad ka heli karto sawirro tayo sare leh adoo bixiya dhowr bilyan oo bil ah. Haddii aad isticmaasho goobaha bilaashka ah ama kuwa lacagta bixiya si aad u hesho sawirro ku habboon, waa inaad hubsatid inaad siisid creditka ku habboon ee daabacaadda si aan cidna kuu dhibin xuquuqda sawirada.
Waxa kale oo suurtagal ah in la abuuro sawiradaada, tanina waa in la sameeyaa oo kaliya markaad aragto sawirada saxda ah ilaha kale. Canva waa qalab sawir leh, oo loogu talogalay labadaba boggaha internetka iyo bloggers, kuwaas oo ka caawiya sameynta sawirro caadin ah. Helitaanka meshaalo badan oo hore loo sameeyey iyo midabada quruxda leh ayaa fudud. Waxaad si fudud u jiidi kartaa template iyo font-ka oo aad sawirkaaga u diyaar garowdo daqiiqado gudaheeda.
Waxyaree Muuqaalada Mashiinka Raadinta:
Marka ay timaado qaabeynta sawirrada matoorada raadinta, waa inaad doorataa magaca feylka saxda ah oo ka soo qaad khadka kaliya ee lagu kalsoonaan karo. Tusaale ahaan, haddii aad qorto sheeko ku saabsan Donald Trump, waa inaad u sheegtaa sawirkaaga "Donald Trump" oo isticmaal isla qoraalka cinwaankaaga. Cabbirka sawirkaaga sidoo kale waa muhiim. Ma ahan inaad isticmaasho sawirro weyn maxaa yeelay waxay saaraan culeys weyn oo ku saabsan serverka waxaana laga yaabaa in ay kordhiso xawaaraha sicirka. Sidaa daraadeed, cabirka ugu fiican ee image waa 200 x 200px. Qoraalka hoose wuxuu sharaxaad kooban kuugu sharxayaa sawirkaaga waana in uu ku haboon yahay maqaalkaaga. Xaqiiji inaad ka saartay hyperlinks-ka sawirradaada ka hor intaanad daabicin alaabtaada.
Sawirka muuqaalka - JPEG, PNG, iyo GIF:
Waxaa jira noocyo kala duwan oo qaabab muuqaal ah sida JPEG, PNG, iyo GIF. Inta badan bloggers iyo webmasters waxay isticmaalaan JPEG maadaama ay sahlan tahay in la buuxiyo oo natiijooyin fiican ka keeno qaababka kale ee labo image.
Bloggers ayaa waqti badan ku qaataan qoraallo tayo leh, sidaa darteed ma aha in ay wax ka qabtaan tayada sawiradooda. Hubi inaad isticmaashid sawirada si aad u fiican oo loogu talagalay rikoodhka wanaagsan ee raadinta raadinta .